Efa akaiky ny fahavitan'ny rihana – FJKM Ambavahadimitafo Efa akaiky ny fahavitan'ny rihana |
Efa akaiky ny fahavitan'ny rihana
Publié le 03 novembre 2008 à 12:11
Folo taona tokoa izay no niarahana nanompo tamin’ny Mpitandrina RAKOTOHARINTSIFA mianakavy teto amin’ny fiangonana AMBAVAHADIMITAFO. Ho fanamarihana izany dia tapa-kevitra ny fiangonana fa hanisy rihana ny trano fiangonana ho tsangam-bato fahatsiarovana.
Efa teo amin’ny roa volana izay no niatomboka ny asa. Koa raha ny asa amin’ny ankapobeny no jerena dia eo amin’ny 50% no efa vita hoy Atoa ANDRIAMAHATSANGY Lahatra (Ingénieur de contrôle) izay mpanara- maso akaiky ny fizotran’ny asa.
Marihina moa fa mpiasa 14 lahy no isan’ny mpiasa manao ny asa. Araka izany dia efa mijoro ireo andry 28, ary ny 40% ny fitoerana (charpente en bois) no efa vita.
Raha mandeha tsara ny asa hoy ihany Atoa ANDRIAMAHATSANGY dia tokony eo amin’ny faha-15 ny volana Febroary no manomboka mananteraka ny asa famaranana ( travaux de finition) toy ny loko, ny fametrahana ny herin’aratra, ny tohatra. Koa heverina fa tokony any amin’ny faran’ny volana Martsa no vita tanteraka ny rihana.
Amin’ny fanatanterahana ny rihana dia mangataka antsika rehetra malala tànana mba hifarimbona, hanampy na hampindrana ny vola ampiasaina ho famitana ny asa satria raha ny eo am-pelatanana, araka ny famintinana nivoaka ny 03 Febroary dia mitentina eo amin’ny Ar 2 067 638, kanefa ny ezaka mbola ho tratrarina dia eo amin’ny Ar 37 038 683.
Koa dia manentana antsika rehetra mba handray anjara. Ary misaotra mialoha antsika rehetra teo amin’ny fanampiana ary ny fitrotroana am-bavaka ny asa rehetra.